स्वास्थ्य/जीवनशैली Archives - Page4of6- कृषि पत्रिका
पनिरका विभिन्न फाइदा
शनिबार ०७ फागुन, २०७३
पनिर एउटा यस्तो स्वादिष्ट पौष्टिक पदार्थ हो, जसले गर्दा हाम्रो भोजमा यसको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । पार्टी सानो होस् वा ठूलो पनिरको हरेक पार्टीको शोभा बढाइदिन्छ । दूधबाट बन्ने भएकाले पनिरमा भिटामिन, क्याल्सियम, फस्फोरस, प्रोटिन, जिंकजस्ता पौष्टिक पदार्थ पाइन्छ । यदि पनिर क्रिमयुक्त दूधबाट बनेको छ भने यसमा चिल्लोको मात्रा धेरै हुन्छ तर यदि […]
कुखुराको मासु धोएर पकाउन नहुने भन्दै यस्तो चेतावनी
शुक्रबार २८ माघ, २०७३
एजेन्सी। तपाइँको पनि कुखुराको मासु किनेर ल्याएपछि धोएर मात्र पकाउने बानी छ भने आजै देखि छोडिदिनुस् । बैज्ञानिकहरुले कुखुराको मासु धोएर पकाउन नहुने भन्दै यसो नगर्न चेतावनी दिएका छन् । कुखुराको मासु धुँदा क्याम्पाइलोब्यक्टर नामक ब्याक्टेरिया फैलिने र यसले खानालाई विषाक्त बनाउने उनीहरुको भनाइ छ । द टेलिग्राफमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार अधिकाँश कुकहरुले पकाउनु अघि […]
क्यान्सरबाट बँच्न ब्रोकाउली खानुहोस्
शनिबार २३ पुष, २०७३
ब्रोकाउलीको सेवनले क्यान्सर लगायतका रोगबाट बचाउने विभिन्न खाले अनुसन्धानले देखाएका थिए । तर पछिल्लो अध्ययनले भने ब्रोकाउली खाँदा मात्र होइन सरीरमा घस्दा समेत क्यान्सरबाट जोगिन सहयोग पुग्ने तथ्य पत्ता लगाएको छ । अनुसन्धानका अनुसार सरीरको छालामा ब्रोकाउली घसियो भने घामबाट डढेर हुने छालाको क्यान्सरको खतरा कम हुन्छ । अमेरिकाको एरिजोना क्यान्सर सेन्टर र जोन हप्किन्स […]
निमपत्ता प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यसको फलका नसोचेका दश फाइदा
आइतबार १६ असोज, २०७३
निमको पात अर्थात ‘निमपत्ता’बाट मिल्ने लाभ र यसको प्रयोगबारे त प्राय: हामी जानकार छौँ । निमपत्ताको उपयोग विभिन्न प्रकारका औषधिको रुपमा गरिन्छ । तर, के तपाइँलाई निमको फलबाट हुने फाइदाबारे जानकारी छ ? हामीले पातमात्रै प्रयोग गर्दै आएपनि निमको फल अझै बहुउपयोगी हुन्छ । १. आँखा र कानका लागि निमको फलको प्रयोग आँखा र कानमा […]
अमलाको जुस सेवनबाट लिनुहोस् यी फाइदाहरु
अमलामा भिटामिन सी पर्याप्तमा मात्रामा हुन्छ । यसको प्रयोग तपाईलाई निकै लाभदायक हुन्छ । अमलामा सुन्तलामा भन्दा २० गुणा बढी भिटामिन सी पाइन्छ । यसमा फाइबर, प्रोटिनका साथै अन्य भिटामिनहरु पनि हुन्छ । आयुर्वेद विज्ञानका अनुसार अमलाको जुस पिउनाले उमेर बढाउँछ । यसको रसमा मह मिसाएर पिएमा अस्थमाको असर कम हुनेछ । यसले रगतमा शुद्दपना […]
प्याजको चिया पिउनुहोस् छिट्टो तौल घटाउनुहोस्
तपाईंले अहिलेसम्म पक्कैपनि प्याजको चियाको बारेमा केही सुन्नुभएको छैन हो । तर प्याजको चिया मानव स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ । प्याजको चियाले तौल घटाउनुका साथै मधुमेहको समस्यालाई पनि न्यूनिकरण गर्दछ । प्याजको चिया प्याजको बोक्राबाट बनाउन सकिन्छ । यसमा क्वेरसेटिन नामको पिग्मेन्ट हुन्छ जसले मानव स्वास्थ्यमा अत्यधिक फाइदा पुर्याउँछ । यसले शरीरमा रगतलाई जम्न दिँदैन […]
गर्मीमा के खाने
बिहिबार ३० असार, २०७३
गर्मीको मौसम शुरु भइसकेको छ । यो मौसममा भुल्नै नहुने कु्रामा पर्छन् छाता, रेनकोट, सजिलो स्लीपर अनि पानी । असिनपसिन भएर काम गर्नु, यात्रा गर्नु गर्मीको विशेषता हो, तर यो मौसम जत्ति रोमाञ्चकारी हुन्छ त्यत्ति नै शरिरमा पानीको अभाव पनि देखापर्छ । शरिरमा पानीको मात्र सन्तुलन गर्न कुन कुन खाद्यपदार्थ उपयुक्त हुन्छन् त १. सलाद […]
स्वास्थ्यमा खुर्सानीको महत्त्व
शुक्रबार २४ असार, २०७३
विश्वमा सर्वत्र खुर्सानीको खेती हुने गर्छ । मुख्यगरी खानका लागि खुर्सानीको खेती गरिने भए पनि यसको औषधीय महत्त्व पनि छ । हजारौँ वर्षदेखि खुर्सानीलाई औषधीको रूपमा उपयोग गरिँदै आएको छ । आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पनि खुर्सानीको महìव स्वीकारेको छ । अनुसन्धानबाट खुुुलाइएअनुसार दुई चम्चा खुर्सानीको धूलोमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन बी कम्प्लेक्स हुनुका साथै भिटामिन ए, […]
क्यान्सर रोक्न नासपातीको सेवन
मङ्गलबार २१ असार, २०७३
मौसम अनुसार पाईने विभिन्न किसीमका फलफुल हाम्रो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । तिनै फलफुलमध्ये एक हो नासपाती । बर्षायाममा सजिलै पाईने यो फल खानको लागि स्वादिलो हुनुका साथै स्वस्थवद्र्धक पनि हुन्छ । यसको सेवनले तपाई कयौँ किसिमको रोगबाट छुट्कारा पाउन सक्नुहुन्छ । १, कोस्ट्रोल : नासपातीमा पाईने प्याक्टिन नमाक घुलनशील फाईबर कोलस्ट्रोलको स्तरलाई नियन्त्रण गर्छ […]
औषधिको काम मकैले गर्छ
अधिकांश एसियाली देशमा मकैको खेती हुन्छ,मकै लोकप्रिय अन्न हो। मकै भुटेर खाँदा पनि स्वादिष्ट हुनुका साथै यसमा भरपूर पौष्टिक तत्त्व पनि हुन्छ। कुनै बिरामी वा कमजोरी भयो अथवा रगतसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि पनि मकै उपयोगी हुन्छ। मकैको उपयोगिता यस्तो छ। : क्षयरोगीका लागि क्षयरोग लागेका व्यक्तिलाई मकैको रोटी सेवन गराए लाभ हुन्छ। : ज्वरोले […]